Tsy misy fotoana ho laniana hanaovana ny asan’ny devoly
«Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa hianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hihavian'ny andron'Andriamanitra.» - 2 Pet. 3:11,12.
Zava-dehibe ny hahatsapan'ny rehetra hoe rivotra manao ahoana no manodidina ny fanahiny, raha miara-miasa amin'ny fahavalon'ny fahamarinana izy ireo ary manatanteraka ny asany amin'ny fomba izay tsy tsapany akory, na mitondra ny ziogan'i Kristy eo am-panaovana ny asany. (...)
Ho faly i Satana raha ny olona rehetra no tonga mpiara-dia aminy amin'ny fampihenana ny fifampitokisan'ny mpirahalahy ka mamafy tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo izay milaza fa mino ny fahamarinana. Afaka manatanteraka ny tanjony amin'ny fomba mahomby indrindra i Satana amin'ny alalan'ireo milaza azy ho sakaizan'i Kristy kanefa tsy mandeha na miasa araka ny fitsipiky ny Tompo (...)
Izao no andro fiomanan'ny Tompo. Tsy manana fotoana hiresahana tsy finoana isika na (...) hanaovana ny asan'ny devoly. Aoka ny tsirairay samy hitandrina mba tsy hanelingelina ny finoan'ny hafa amin'ny famafazana ny voan'ny fitsiriritana sy ny fialonana ary ny fisaratsarahana; fa henon'Andriamanitra ny teny ary mitsara lzy, tsy amin'ireo filazana hoe eny sy tsia fa amin'ny vokatry ny asantsika (...)
Ankehitriny dia mbola hazohina ny rivotra efatry ny lanitra hatramin'ny fotoana hametrahana tombonkase eo ny handrin'ireo mpanompon'Andriamanitra. Dia hanangona ny heriny ho amin'ny ady lehibe farany ireo fahefana eto an-tany. Endrey manao ahoana no tokony hanararaotantsika ny fotoana kely sisa ananantsika mba hizahan-toetra antsika! Fandinihan-tena lalina manao ahoana no tokony hataontsika! (... )
Ny fifehezana ny saina ary ny fahadiovan'ny fo sy ny eritreritra no ilaina. Manana tombambidy ambony kokoa noho ny talenta, ny fahaiza-mandanjalanja na ny fahalalana mamiratra izany. Ny saina tsotra, nozarina mba hankatô ny «izao no Iazain'ny Tompo» dia tsara kokoa ho an'ny asan'Andriamanitra noho ireo izay manana fahaiza-manao kanefa tsy mampiasa izany araka ny tokony ho izy (...)Afaka mirehareha amin'ny fahalalany ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ny olona; saingy raha tsy manana fahalalana an'Andriamanitra marina, an'i Kristy Lalana, ny Fahamariana ary ny Fiainana izy ireo, dia tsy mahalala na inona na inona ary ny fahalalan'izy ireo dia ho levona miaraka aminy. Hery ny fahalalana omen'izao tontolo izao; saingy ny fahalalana avy amin'ny Teny, izay manana hery miasa mangina manova ny sain'olombelona, dia tsy mety lo. - RH, 27 Nôvambra 1900.